Kantipur-किम्फ कथा - कान्तिपुर समाचार
नेपालका प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिभलमध्ये काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) एक हो । यो हुन थालेकै १७ वर्ष भइसकेछ । पहिले दुई वर्षमा एकपटक हुन्थ्यो भने अचेल वर्षैपिच्छे हुन्छ । किम्फको पुरानो ठेगाना रुसी सांस्कृतिक केन्द्र हो, त्यसपछि सभागृह र पर्यटन बोर्ड हुँदै अहिले कमलपोखरीको कुमारी हल पुगेको छ ।
महोत्सवमा भाग लिन आउने विदेशी फिल्म मेकरलाई राम्रो सुविधा दिन नसक्दा थापा खिन्न हुन्छन् । विदेशी महोत्सवलाई त्यहाँको सरकार र सम्बन्धित संघसंस्थाले सहयोग गरेको देख्दा उनका आँखा रसाउँछन् । हामीकहाँ कहिले आउला त्यस्तो दिन ? कहिले पाउला कला क्षेत्रले सरकारको साथ ? जेहोस्, किम्फ चलिरहेकै छ । यो टिक्नुमा आफूहरूको स्वयंसेवालाई जस दिन्छन् थापा । किम्फका कर्मचारी नि:शुल्क सेवा दिइरहेका छन् भन्ने थाहा पाउँदा कतिलाई आश्चर्य लाग्ला ।
यसपाीलको किम्फको रौनक के हो भने यसमा ‘लाइभ स्टोरी पिचिङ’ हुँदैन । यसमा चार/पाँच जना निर्णायकसामु निर्देशकले आफ्नो फिल्मको कन्सेप्ट बयान गर्नुका साथै केही भिडियो क्लिप्स देखाउनुपर्नेछ । उनीहरूमध्ये उत्कृष्ट मानिएको डकुमेन्ट्री, फिल्मलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
समारोहको उद्घाटन ‘द लास्ट हनिहन्टर’ बाट गरिनेछ । ‘हेमा हेमा : सिङ मि अ सङ ह्वाइल आई वेट’, ‘चिन्ड्ेरन अफ द स्नो ल्यान्ड’ जस्ता फिल्मको स्पेसल स्क्रिनिङ हुँदैछ । स्विस भूगर्भविद् टोनी हेगनको सम्झनामा उनले खिचेका पुरानो नेपालका तस्बिर फेस्टिभल हुने कुमारी हलमा सजाइनेछन् ।